Khadka tooska ah ee OCR wuxuu ka dhigayaa qoraalka la sawiray mid wax laga beddeli karo | Abuurista khadka tooska ah
Waa wax caadi ah in qoraal gaar ah sawir ama sawir laga qaado. Waana inaad aragto sida caajiska ah ee aan dib ugu qoreyno wax walba kumbuyuutarkeena: midkood maxaa yeelay waa shaqada saaxiibkeen oo aan dooneyno inaan balaarino, ama sababtoo ah waxaan door bidnay inaan wax ka bedelno waxyaabaha qaar
Maanta waxaad nasiib ku jirtaa: waxaan soo helnay qalab khadka tooska ah lagu aqoonsado oo qoraalladan loo beddelayo .txt, .doc ama .xls (Excel) dukumiintiyo. Sii wad akhriska oo soo ogow!
Onleenka OCR wuxuu badalaa qoraalka waqti aan fogeyn
Marnaba ma maleyn karno, laakiin u-beddelashada qoraalka muuqaal ahaan qoraalka oo wax laga beddeli karo ayaa halkan loogu mahadcelinayaa Online OCR. Iyadoo qalabkan internetka Waxaan ku soo dhejin karnaa sawir (in .jpg, .jpeg, .bmp, .tiff ama .gif format) oo aan ku haysanno qoraalka la doonayo oo aan ugu beddelayno eray wax laga beddeli karo, qoraal cad ama heer sare ah. Iyo tan ugu fiican, waa adeeg bilaash ah, oo xaddidaadaha kaliya ay yihiin, hal dhinac, in faylasha la soo raray aysan ka badnayn 4 MB cabir ahaan. Dhinaca kale, in ugu badnaan saacaddiiba waxaad u rogi kartaa wadar ahaan 15 sawir.
Ma rabtaa wax intaa ka badan? Ku hel adoo iska diiwaangelinaya websaydhka. Maskaxda ku hay in uu yahay bog ku qoran Ingiriis, laakiin hawlgalkiisu waa mid aad u fudud oo dareen leh. Si aad awood ugu yeelatid inaad u rogto sawirka qoraalka wax la saxo, si fudud:
Ka dib qaybta "Bilaash" ee bogga ugu weyn, riix batoonka oranaya "Xulo faylka" oo xulo sawirka (oo ka yaraan kara 4 MB).
Dhagsii badhanka "Soo rar", oo ku yaal bidixda.
Hadda, waa inaad ku xushaa "Aqoonsiga luqadda" luqadda qoraalka aad rabto inaad beddesho iyo qaabka aad rabto inaad ku haysato (.doc, .txt ama .xls). Hadda dhagsii badhanka "Aqoonso", oo ku yaal dhinaca bidix.
Xariif ah! Hoosta sanduuqa qoraalka waxaad ku haysaa badhanka "Soo Degso Waxyaabaha Soo Saara". Riix oo soo dejiso.
Waa lagama maarmaan in maskaxda lagu hayo in, maadaama ay tahay isbadal otomaatig ah, ay dhici karaan khaladaad yar yar oo qoraalka ah. Anaga ahaan, tusaale ahaan, kadib markii aan tijaabin ku sameynay qoraal ku qoran af Ingiriis, S ayaa u tarjumay calaamadda doollarka ($): guuldarro aan haba yaraatee soo faragelin fahamka dukumintiga.
Way fiicnaan laheyd haddii, mustaqbalka, qalabkani uu sidoo kale aqoonsan karo dukumiintiyada gacanta lagu qoray: in si dhakhso leh loogu beddelo qoraalka wax laga beddeli karo. Waxaan markaa ka dhigi karnaa lambarro badan iyo qoraallo muhiim ah ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Onlaynka OCR wuxuu u rogaa qoraalka la sawiray qoraal wax laga beddeli karo